Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Tabex - Atsaharo ny fifohana sigara izao!
Ireo mpifoka sigara dia manana risika be kokoa voan'ny COVID-19
Momba an'i Tabex
Ahoana ny fampiasana azy io
Momba ny Hazo Luburum
Buy Mividy fonosana pilina Tabex amin'ny Internet - pilina 100 € 34,95
Ny momba an'i Tabex rehetra - Ny fanafody voajanahary rehetra hanampy anao hiala amin'ny sigara
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Tabex
Nandritra ny 50 taona mahery, Tabex dia nanampy olona an-tapitrisany maro tany Eoropa Atsinanana mba hiala amin'ny sigara amin'ny fomba azo antoka sy voajanahary. Any amin'ny lavitra 1865 acad. Hitan'i Orehov sy namakafaka ny cytisine alkaloid voarakitra ao amin'ny Family Papilionaceae ary izy no fitaovana mavitrika lehibe ao amin'ny Tabex®. Ny Cytisine dia an'ny vondrona blocker nikotinina izay fantatra amin'ny fampiharana azy ho stimulateur respiration. Ny cytisine famakafakana ara-panafody amin'ny departemantan'ny pharmacology ao amin'ny Sofia Medical Institute dia nanomboka raha vao nanomboka ny taona 50 tamin'ny taon-jato farany ary ny tanjon'izy ireo dia ny hamorona endrika fatra ho an'ny filàna famerenana amin'ny laoniny. Nandritra ny andrana natao tamin'ny saka anestezia, mpanao fanafody fanafody Bulgaria roa malaza
Prof. Paskov sy Dr. Dobrev dia nanatsoaka hevitra farany fa noho ny poizina ambany kokoa noho ny nikôtinina ary ny ankamaroan'ny fiantraikan'ny peripheral malemy kokoa amin'ny cytisine amin'ny rafitra kardiazy dia azo ampiasaina ho fitaovana fampitsaharana sigara satria mifandraika amin'ireo mpandray azy mitovy amin'ny olombelona vatana miaraka amin'ny nikôtinina. Ny zavatra manaitra amin'ity tantara ity dia ny dimam-polo taona lasa izay, mpivaro-panafody mpifoka sigara roa no tonga tamin'ny hevitra mahafinaritra ny fomba hanomezana fahafaham-po ireo olona miankina amin'ny sigara handeha mora foana mandritra ny aretin'ny fifadiana, miaraka amin'ny vanim-potoana fijanonan'ny sigara sy amin'ny fotoana mitovy. mahatsapa taitaitra, toy ny cytisine koa nanamafy ny anti-gastrointestinal vokany.
Tamin'ny 1962, tao Bulgaria Prof. Isaev dia nanoka ny cytisine tamina zavamaniry misy gadra rojo volamena ary nanomboka fikarohana lalina momba ny famoronana ny vokatra fitsaboana voalohany Tabex®. Ny fanadihadiana ara-pitsaboana lehibe tany Bulgaria, Alemana ary Polonina dia nanamarina ny fahombiazany sy ny ankamaroan'ny filàna fihetsika miabo amin'ny ezaka fitsaharana. Fantatra tsara fa ny aretin-tsaina sy ny tsy fetezana dia aretin-tsaina, izay miaraka amin'ny fiankinan-doha, izay sarotra resena. Ny fandalinana klinika natao tany Bulgaria sy tany ampitan-dranomasina dia nanamafy izany tombony amin'ny Tabex izany.
Ahoana no fiasan'ny Tabex ao anatin'ny atidohanao? Ahoana ny fampiasana Tabex Fandinihana klinika momba ny Tabex Momba ny Hazo Laburnum
Aza miandry intsony
Tsy ho eto amin'ity tranonkala ity ianao raha tsy te hanana fiainana setroka.
Mandidia ny Tabex anao anio!
Soraty eo amin'ny lisitry ny mailakao
Fivarotana, vokatra vaovao ary varotra. Mianara mivantana amin'ny mailakao.
Mitady Gift Cards Laharana fandraisana na rohy politika fiarovana fiainan'olona Terms amin'ny Service Refund Policy Shipping Policy Ny pejiko manokana Hanovaova angona manokana Mangataha tahiry manokana Company info